NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် Testronic Labs က Burbank,, CA များနှင့်ဝါဆော, ပိုလန််ဆောင်မှုများအတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပြီး Workflows နေရပ်လိပ်စာမှ Archion ရဲ့အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည် EditStor Omni သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
Home » သတင်း » Testronic Labs က Burbank,, CA များနှင့်ဝါဆော, ပိုလန််ဆောင်မှုများအတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပြီး Workflows နေရပ်လိပ်စာမှ Archion ရဲ့အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည် EditStor Omni သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
Testronic Labs က Burbank,, CA များနှင့်ဝါဆော, ပိုလန််ဆောင်မှုများအတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပြီး Workflows နေရပ်လိပ်စာမှ Archion ရဲ့အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည် EditStor Omni သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
Los Angeles မြို့,, CA, ဇွန်လ 24, 2019 - Archion Technologies က, အသိဉာဏ်, ultra- မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက် အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုအဘို့, ကြေညာခဲ့သည် Testronic Labs က, အရည်အသွေးကိုအာမခံချက် (QA), ဒေသခံန်ဆောင်မှုများနှင့်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဂိမ်းများစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လိုက်နာမှုအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, Archion ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး EditStor Omni သိုလှောင်မှုစနစ်များကို။ ဤရွေ့ကား Archion ဖြေရှင်းချက် Testronic ရဲ့တည်နေရာနှစ်ခုမှာအသုံးပြုနေသောခေါင်းစဉ်: Burbank,, CA များနှင့်ဝါဆော, ပိုလန်။
Testronic လန်ဒန်, ဝါဆော, Burbank နှင့်စန်တီယာဂိုအတွက်အဆောက်အဦးများနှင့်အတူရုပ်ရှင်, တီဗီ, ဂိမ်းများနှင့်ပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီး QA သို့တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ 20 နှစ်အတွင်းတည်ထောင် Testronic သခင်ထံမှကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ, ရှိသမျှအဆင့်ဆင့်မှာအကြောင်းအရာစမ်းသပ်, နိုင်ငံတကာ Device ရဲ့အကွာအဝေးပေါ်တွင်စားသုံးသူအတွေ့အကြုံကိုစမ်းသပ်, OTT အကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသေချာသူကိုအရည်အသွေးကိုအာမခံချက်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့များသည်အသုံးပြုသူများကိုအဆုံးသတ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအတွေ့အကြုံကယ်နှုတ်တော်မူရှိပါတယ် ။
သူတို့တစ်တွေအလွန်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ Burbank, CA. ၎င်းတို့၏စက်ရုံများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောကွန်ရက်ကသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များလိုအပ်နေခဲ့ကြသောကြောင့်, Archion ရဲ့ EditStor Omni Testronic Labs ကမှမိတ်ဆက်ခဲ့သည် NAB မှာအစည်းအဝေးတစ်ခုနှင့်တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြစဉ်အတွင်းဂျေဆန် Gish, ရုပ်ရှင်နဲ့ TV ၏ Testronic ရဲ့သမ္မတ, EditStor Omni ဦးပထမဦးဆုံးလက်လုပ်ဆောင်ကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်, Archion အယူအဆ၏စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်သက်သေပြဘို့ Testronic Labs က Burbank စက်ရုံမှာ EditStor Omni ချထား။ အောင်မြင်တဲ့အကဲဖြတ်ပြီးနောက် Gish တစ်ခု Omni များ၏ဝယ်ယူအတည်ပြုခဲ့သည်။
ဒီအောင်မြင်မှုပြီးနောက် Archion Testronic Labs ကသူတို့ရဲ့တိုးချဲ့ပိုလန်တည်နေရာသစ်တစ်ခုမီဒီယာသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ကြောင်းအသိပေးခံခဲ့ရသည်။ လညျးမိမိလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာ Burbank စက်ရုံမှာ Omni တိုးချဲ့နေချိန်မှာ Gish, ဝါဆောအတွက် Testronic ရဲ့စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အသစ်တစ်ခု EditStor Omni များ၏ဝယ်ယူအတည်ပြုခဲ့သည်။
Testronic လက်ရှိသူတို့ရဲ့ Warsaw ကိုတည်နေရာအတွက် Omni ချိတ်ဆက်ထားပြီးစက်၏အလားတူအရေအတွက်သည်နှင့်တကွ, 20 Macs ကျော်တစ်ဦးရောနှောရှိပါတယ် PC များနှင့်၎င်းတို့၏ Burbank စက်ရုံအတွက် EditStor Omni ချိတ်ဆက်ထားပြီး Linux ကိုစက်။
ထက်ထက်သန်သန်မြန်နှုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သိုလှောင်မှုထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Burbank နှင့်ဝါဆောတည်နေရာများအတွက် Archion ရဲ့ EditStor Omni ကို ရွေးချယ်. ", သူ့လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာကုမ္ပဏီ၏ထောက်ခံမှုအတွက် Archion ရဲ့ EditStor နည်းပညာနှုတ်ဆက်ပြီးပြောပါတယ်ခဲ့သူဂျေဆန် Gish, Testronic ရဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဌာနတွင်သမ္မတ, လိုအပ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ UHD / 4K, HDR 10, DolbyVision နှင့် Dolby Atmos တူသောဒေတာတွေအများကြီးဆံ့ကြောင်းဖိုင်များ, ကစားရန်အစာရှောင်ခြင်းသိုလှောင်မှုအော်ဟစ်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Archions ဖိုင်သိုလှောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက system အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါဆောနဲ့ Burbank နေရာများတွင် installed ထွက်ကစားနေကြသည်။ ဤအဖြေရှင်းနည်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များပူဇော်အကျိုးကျေးဇူးများအဆင့်မြင့်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ပြန်ဖွင့်ပါဝင်သည်။ စင်ကြယ်သောချောမွေ့ပြန်ဖွင် QC များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အခြားစနစ်များပြန်ဖွင်ကိစ္စများမိတ်ဆက်ပါပြီ။ ကျနော်တို့သူတို့အားပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်, ငါတို့ QC'd ခံရဖို့ဖိုင်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအမြင်များကို Archion ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ "
"ဒီ Archion Omni ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်မှတက်အသက်ရှင်တော်မူသည်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးနေရာများအတွက်စနစ်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကအပြုသဘောနှင့်အကျိုးရှိသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပွင့်နေချိန်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုခဲ့ပြီးပြီ, နှင့်အမြန်နှုန်းနှင့် throughput သူတို့ဖြစ်အခိုင်အမာနေကြသည်အရာအားလုံးဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့မေးခွန်းများသို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်အခါတိုင်းအဆိုပါ Archion အဖွဲ့သည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးများပိုပိုပြီး clients များ add အဖြစ်, Archion နှင့်အတူကြီးထွားဖို့ဆက်လက်, ငါတို့ Workflows လည်းကြီးထွားဖို့ဆက်လက် "ဟုသူကဆက်ပြောသည်။
ကျော် 15,000 ကို MB ၏အမြန်နှုန်းပို့ဆောင် EditStor Omni / ဒုတိယ, ထုတ်လုပ်ခြင်း, Post-ထုတ်လုပ်မှု, ဖန်တီးမှုအေဂျင်စီများနှင့်အခြားဖန်တီးမှုအဆောက်အအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ high-performance ကိုပူးပေါင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်တစ်ခုတည်းမီဒီယာသိုလှောင်မှုစနစ်ကထောက်ပံ့ပေးသည်။ 8K ဗီဒီယိုမှကုန်ကြမ်းမီဒီယာဖိုင်များကို 4K ပြန်ဖွင့်ဖို့, အ Omni NAS storage ကို server ကိုအများဆုံးစိန်ခေါ်မှုမီဒီယာ Workflows ကိုင်တွယ်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်, အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့် function ရှိပါတယ်။
EditStor Omni ကိုယ်ထည်နှုန်း 24TB တက်၏တစ်ခုတည်းသော server ကိုစွမ်းရည်, ပူ pluggable တိုးချဲ့ node များနှင့်အများအပြား Petabytes သို့စုစုပေါင်းချဲ့ထွင်နဲ့အသိဉာဏ် 336 drive ကိုသိုလှောင်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသည်ထင်ရှားတဲ့တည်းဖြတ်ရေးနှင့်အတူလိုက်ဖက်မှု, ပြီးသွားနှင့်Adobe®, Apple®ထံမှထိုအပါအဝင်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု applications များ, သေချာစေရန်အဘယ်သူမျှမ Third-party software များသို့မဟုတ် drivers တွေကိုလိုအပ်သည်ပြည့်စုံ turnkey ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် လွန်စွာလိုလားသော®, Autodesk®, Blackmagic Resolve®နှင့်ပိုပြီး။
ရုဗင်လီမာ, Archion ရဲ့ CEO ဖြစ်သူကျနော်တို့ဂျေဆန် Gish နှင့် Testronic သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏မီဒီယာကျောရိုးအဖြစ် Archion သိုလှောင်မှုနဲ့အတူသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကကြီးထွားဖို့ဆက်လက်အလွန်လေးမွတျများမှာ "ကထပ်ပြောသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခံရဖို့အခှငျ့ထူးရဲ့, ကြှနျုပျတို့တကမ္ဘာလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဆက်လက်တိုးချဲ့နှင့်အောင်မြင်မှုသက်သေခံများနှင့်တွေ့ကြုံခံစားရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ "
ယခု ALT စနစ်များတစ်ဌာနခွဲ Edge, တစ်ဦးမီဒီယာ System Integration ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်နေစဉ် EditStor Omni, ထိုအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖိုင်မှတ်တမ်းအခြေခံပြီး Workflows အားဖြင့် Testronic ရန်အကြံပြုခဲ့သည် Testronic မှာအောင်မြင်သောဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်စနစ်အပေါင်းစည်းမှုအတွက်နျဆာပခဲ့သည်။
Testronic ရဲ့မြင့်မားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းများ clients များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် 1998 ကတည်းကစားသုံးသူအတွေ့အကြုံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြသည်။ ရုပ်ရှင်, တီဗီ, နှင့်ဂိမ်းများအပါအဝင်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အရည်အသွေးကိုအာမခံချက်, လိုက်နာမှု, နှင့်ဒေသခံန်ဆောင်မှုများ၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူအဖြစ်, Testronic အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစားသုံးသူ Deliverable ၏ထိရောက်သောနှင့်လုံခြုံပေးပို့သေချာ။
Burbank,, CA အခြေစိုက်; လန်ဒန်, ဗြိတိန်, ဝါဆော, ပိုလန်, နှင့်စန်တီယာဂို, ချီလီ, Testronic တစ်ခုလုံးကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းဖြတ်ပြီးလာမယ့်မျိုးဆက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုထူးချွန်၏တစ်ဦးမတူနိုင်တဲ့သမိုင်းပေးထားပါတယ်။
အခြေစိုက် Los Angeles မြို့,, CA, Archion Technologies က အထူးသအယ်ဒီတာအဖွဲ့, ပြီး, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားမီဒီယာ Workflows များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအသိဉာဏ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Archion ရဲ့သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်အသံလွှင့်ကုမ္ပဏီများ, Corporation, ကို Creative အေဂျင်စီများ, ကိုးကွယ်မှုများ၏အိမ်များ, ထုတ်လုပ်မှု / Post ကို-ထုတ်လုပ်မှု Studios က, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေမှုပွဲတွေထဲမှာ, တက္ကသိုလ်များနှင့်ထို့ထက် ပို. မှာတည်ရှိပါတယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။
Post-ထုတ်လုပ်မှု, နည်းပညာ, နှင့် 1998 အတွက်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတည်ထောင်, Archion shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်တတ်နိုင်၏စံနှုန်းသစ်တခုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ယင်း၏တည်ထောင်ကတည်းကကုမ္ပဏီ၏သိုလှောင်မှုနည်းပညာတီဗီ, ရုပ်ရှင်, စီးပွားဖြစ်, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုဖန်ဆင်းခြင်းစီမံကိန်းများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏အောင်မြင်မှုကိုမှဝေဖန်ခဲ့ကြပြီ။
စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ် Archion နည်းပညာရဲ့မူပိုင်ခွင့်, Ultra-မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့အရွယ်မှာက Shared သိုလှောင်မှုနည်းပညာ, ချဲ့ထွင်အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားပေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့အလုပ်လုပ်ဖန်တီးမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည်။
Archion ရဲ့သိုလှောင်မှုစနစ်များကိုအများဆုံးမကြာခဏပေါင်းစပ်ပညာရှင်များအသုံးပြုသောနေကြတယ် လွန်စွာလိုလားသောApple, Adobe က, Autodesk, Blackmagic ဖြေရှင်းရန်, NewTek နှင့်အခြားဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းအသွားအလာကိရိယာများ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.Archion.com
ဒန် Stern ပာ
အဆိုပါ Asbury PR စနစ်အေဂျင်စီ
ဒန် Harari အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Testronic Labs က Burbank,, CA များနှင့်ဝါဆော, ပိုလန််ဆောင်မှုများအတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပြီး Workflows နေရပ်လိပ်စာမှ Archion ရဲ့အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည် EditStor Omni သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ - ဇွန်လ 24, 2019
အဆင့်3Productions စပျစ်သီးကို TV Infomercial နှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Clients သည်၎င်း၏ကြီးထွားလာအယ်ဒီတာ့အာဘော်လုပ်ငန်းကိုပံ့ပိုးဖို့ Archion ရဲ့ EditStor Entrusts - ဇွန်လ 15, 2017
Post ကိုအချိန် Studios ကအပြီးအစီးအယ်ဒီတာ့အာဘော်လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့မဟုတ်မတူကွဲပြားသောဖျော်ဖြေမှု & ကော်ပိုရိတ်မီဒီယာစီမံကိန်းများများအတွက်နီးပါး 300TB က Ultra High Performance Archion သိုလှောင်မှုစနစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ - မေလ 22, 2017
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော OTT SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-06-24
ယခင်: နယူးအဆိုတော် Cam နှင့်အတူ Diplo ရဲ့ "ဒါကြောင့် Long က" ဂီတဗီဒီယို, Blackmagic ဒီဇိုင်း URSA Mini ကို Pro နဲ့ Blackmagic RAW အသုံးပြု